1 Nrụrụ ọrụ okporo grid ike obodo megharịrị.
2 City ọchịchị mmegharị oru ngo.
3 Mwube nke ọdụ ụgbọ elu obodo.
4 Ogige ụlọ ọrụ, iwu obodo.
5 Okporo ụzọ na àkwà injinia ewu
Nke gara aga: Carbon eriri abụọ-ụzọ ejikọta anwụrụ
Osote: Carbon eriri ala